Bulchaa Godina Wallagga Lixaa Dabalatee kantiibaafi Kaabinoonni hedduun magaalaa Gimbiitii guyyaa har’aa Konkolaataa toorbaan ajjabamanii Naqamtee seenanii jiru.Qeerroon Naqamtee bakka warreen kun qubatan barbaadaa jira.Ammaaf garuu #Bete_mangistii seenu jedhamee yaadamaa jira.Hoteela nama dhuunfaa akka hinbulle Qeerroon Leeqaa Naqamtee akeekkachiisee jira.
Waraanni mootummaa wayyaanee haga yaadamuu ol guutuu Oromiyaa keessatti bobbaafamee jira.
Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessa waraanni konkolaataa hedduudhaan galgala kana buufatee jira. Gara aanota baadiyyaatti bobbaasu jedhamee yaadama. Namoonni aanaa lixa Oromiyaarraa namoota beektan bilbilaanis ta’u namuu akka quba qabaatuufi tooftaatiin akka mormii geggeessu gurra buusaa!
Daandiin Ijaajjiifi Geedoo gidduu bifa kanaan cufameera. Konkolaataadhaan karaa cufuudhaan furtuu konkolaachistootarraa sassaabanii jiru. Kun qabsoo bu’a qabeessaafi miidhaa hir’isudha!
Abdisa on March 5, 2018 at 7:59 am said:
Wayyaaneen akkuma biyyatti nuqabdee jirtu karaa biyya alaa kanallee haxxee nutti hiitee jirti. Kanaafuu @Qeerroo n bakka jirutti jajjabaachuu qaba.